Top 10 Best Free Video Joiners iyo sida loogu biiro Videos
Marka ay timaado in videos tafatirka, waxaa jira waxyaabo badan oo aan la fahmin oo ka mid ah shuruudaha ku lug, falinjeeerka, qaybsama, ku biiro, biirtay abuurka iyo goynta. Qaar badan oo ka mid ah waxyaalahan oo lagu wareero oo la mid kale si aynu eegno kasta waxa ku jira.
Files tageynaa - tani waxaa ay kor u jaray video dheer galay clips yar in dhammaan la shaqsi ciyaari karo, inta badan loo isticmaalo YouTube.
Daluugta Files - Tani waa wax yar oo kala duwan, falinjeeerka video ah waxay ka dhigan tahay jarida xabbadood aan la rabin soo baxay, sida xayaysiin ah
Ku biirista iyo tan shuqullada kaliya laga guurayo waa wax la mid ah, jeestay dhowr video files mid dheer keliya, haddii qaabab faylka sida
xallinta iyo bitrate waa isku mid, oo waxaa badanaa loo isticmaalaa wax soo saarka ka camera video ah, halkaas oo aad ka badan videos ka mid biqil ka heli
Abuurka habka loo adeegsado si loo soo gooyay ama meesha laga saaro qaybo ka mid ah aan la rabin jir ah inuu ka tago ka danbeeyaan kaliya qayb ka mid ah garaafka loo baahan yahay
Goynta - isla sida qaybsama, inkastoo inta badan videos waa la baabbi'iyey, iyo qayb ka mid ah waxaa lagu tuuraa, dhamaadka ama bilowga biqil tusaale ahaan
Sidaas sida aan ka arki kartaa waxaa jira dabin yar in dadka ku dhacaa la video tafatir, iyo erey-yahay oo kaliya bilowgii, inkastoo aan u Dhawyahay dulmar kooban oo waxa ay ku lug caawisaa halkaas. Intaa waxaa dheer, waxaa xusid mudan in halka ay jiraan ogaaaday xeerarka multifunction video tafatirka halkaas, waxay inta badan ku xanuunsado karaa in yar oo ka mid ah bloat, iyo halka ay qaban karaan shaqooyinka keli, sida ku biiro video oo qayb ka ah ay qaadato waajihid tusaale ahaan, ay u badan tahay samayn doonaa gaabis ka badan qalab gaar ah oo kaliya biiray videos.
Avidemux waa u furan-il oo lacag la'aan ah iyo cross madal (Microsoft Windows, Linux iyo Mac OS X) video editor loogu talagalay soo biiray video deg deg ah, falinjeeerka iyo hawlaha shaandhaynta. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida MP44, Mpg, AVI, OGM, MKV, FLV iyo in ka badan. Halkan waxa kale oo uu yahay helitaanka-bilowday tutorial u Avidemux ayaa kuu gudbin kara.
Waxaa laga yaabaa in dhibaato ka qabashada qaar ka mid ah qaababka.
VirtualDub waa aalad video tafatirka xoog leh qaababka badan oo faa'iido leh oo kugu caawin karo samaynta noocyada kala duwan ee isbedel video laakiin ilaalinta tayada video ee la mid ah sida ka hor. Waxa kale oo uu leeyahay awoodaha Dufcaddii-processing fuliyo tiro badan oo files waxaana lagu kordhin karaa dhinac saddexaad video miirayaasha.
Miyuu doorasho video Qabsashada;
waxaana lagu kordhin karaa dhinac saddexaad video filtarrada;
Miyuu awoodaha Dufcaddii-baaraandegidda u maarayso tirada badan ee files.
Sida ay magaceeda soo jeediyay, Free Video Joiner waa aalad video free joiner oo ka shaqeeya u fiican. Waxa ay taageertaa videos in AVI, wmv, MPEG, MP4, MOV, DVD, VCD iyo in ka badan. Marka aad video ku soo biiray, waxa aanu saamayn tayada video, laakiin waxay qaadataa waqti dheeraad ah oo qashinka ah.
Video qalabeed Waa online qalab video tafatirka lacag la'aan ah taas oo uu leeyahay set qani ku ah hawlaha video. Laakiin sida laga daadiyo badan oo online, waxaa ku soo rogay xanibaada size of 300MB ah ee aad video files. Si aad u isticmaasho, waa inaad marka hore iska diiwaan geliyaan iyo files bartilmaameedka laga disk adag ama video goobaha internetka. Markaas kalluumaysto hawsha laga guurayo isticmaali amarka ka dropdown ah.
Miyuu xaddidaadda size of video (600 MB) ah.
Factory Qaabka waa ay ka buuxaan ciyaaray video iyo Converter audio. Waxaa loogu badalo kartaa video, audio, sawir, iyo CD-yada jeexid, DVD-yada in ay qaabab kale file, iyo sidoo kale la abuuro image ISO files. On top of in, waxa uu siiyaa hoosaad ka mid ah qalab haya qaybsama file oo laga guurayo. Waxa kale oo aad ka beddeli karaa qaabka iyo xajmiga file wax soo saarka.
Fursadaha video tafatirka aasaasiga ah.
Software Tani waa nuxurka interface user u qalab kale oo u furan il in xoogaa waa user aan furfurnayn, suuragelinayo ah interface user fahmi karo qalabka ugu wanaagsan lacag la'aan ah waxaa a. Sida xirmo software inkasta oo ah, ma jirto wax khalad ah oo habkani, iyo qalabka diyaar u ah soo biiray oo ku biirtay waa heerka ugu horeysay, iyo software u shaqeeyo si dhakhso ah, halka bixiya tiro balaadhan oo ah socon qaabab video.
Interface waa wax yar clunky, laakiin waxa aanu shaqada iyo software uu leeyahay qalab dheeraad ah oo shaqo kale oo tafatir sida jarida iyo falinjeeerka sidoo, shaqeynayaan ku daray in isku dhafan oo interface ka sii aasaasiga ah ka dhigi kara hawlaha qaar ka mid ah taabashada ah inkastoo lagu wareerayo.
Ugu danbeyntii wax yar ka dhib badan in la isticmaalo, laakiin aad u wanaagsan.
Tani waa mid kale oo ka mid ah barnaamijka aad u fudud in kaliya wax ka mid ah sameeya, biiri video files. Waxa ay in hal shaqo oo aad u fiican inkastoo, waxa ay leedahay interface ah mid aad u fiican, si deg deg ah u qabata hawsha iyo waa mid aad u fudud runtii si ay u isticmaalaan, xataa bilaabayso in video tafatirka. Inkastoo interface uusan qaadi kacdo design of qaar ka mid ah halkan, waa mid fudud oo soo jiidasho leh oo ka dhigaysa aalada ah mid aad u fudud in ay raacaan, oo xitaa waxaa ka mid ah ciyaaryahan video xunna ciyaaray aad.
Barnaamijka yar Great in biiray files video si fudud oo dhaqso, ma aha sida dad badan oo qaabab file socon sida qaar ka mid ah.
Video Joiner waxaa ka mid ah taageerada ay u tiro balaadhan oo ah qaabab video ah oo uu leeyahay mid ka mid ah interfaces user soo jiidasho ku saabsan isbarbardhigga this, iyo Isudumo files si aad u fudud, haddii wax yar si tartiib ah. Iyada oo awood u leh inay ku biiraan files of qaabab kala duwan oo wada aalada toos ah u bixisaa wax walba user cusub waxay u baahan karaan, iyo halka xawaaraha waa wax yar ka dhiman yihiin, waxa ay taasi kor u leh user saaxiibtinimo interface.
Mid aad u fudud oo soo jiidasho leh interface kani ka mid farxad ah in la isticmaalo.
AVI Free / MPEG / wmv / MP4 / FLV Video Joiner
Tani video Joiner bixisaa aalada la mid ah ee baakadaha kale oo asaasi ah halkan, la abuuro liiska videos si sax ah, ku dhuftay badhan oo ay isku biiri, qaabab kala duwan yihiin oo dhan la daryeelo aad u. Tani waxay la mid ma eego si deg deg ah u shaqeeyaan oo ula qabsan kartaa tirada file badan oo ka wanaagsan yahay qaar ka mid ah halkan. Waxaana ay ku aaddan tiro balaadhan oo ah qaabab video ah oo uu leeyahay interface aad u nadiif ah in qof kasta fahmi karo oo aynu eegi deg deg ah, samaynta sidan xirmo waa fiican markii hore video tifaftirayaasha kaliya isha ku heysa inay isku biiri faylasha qaar ka mid ah.
Inkasta oo dhan ay bixiyaan shaqeynta la mid ah, tani waxay u muuqataa mid si fiican wax yar ka badan kuwa kale la safeeyey by la barbardhigo, gaar ahaan bandhig, laakiin ma aha halkan dhaqsiyaha badnaa ee.
Last lagu talinayo: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Inkastoo freeware sare ku xusan kaa caawin kara inaad si fudud ku biiro videos qaabab kala duwan, waxaad u baahan kartaa video editor ah xirfad dheeraad ah si ay u gutaan qaar ka mid ah hawlaha sare video tafatirka. Halkan ka Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Video ayaa aad isku biiri la barnaamijkan ma waayi doono wax kasta oo tayo leh file ee asalka ahaa. Ka sokow, sidoo kale si fudud aad isku shaandheyn karaa, kala, dalagga, darto saamaynta gaar ah sida sawir-in-sawir (PIP), isku dari kara mosaic, cut boodi, ECT fudayd. Fiiri sida loogu biiro video ah daaqadaha iyo sida loogu biiro video ah Mac talaabo talaabo halkan. Hadda uun soo bixi oo isku day inaad ka soo!
> Resource > Video > Top 10 Free Video Joiners si fudud loo soo biir Your Videos